Cabdiraxmaan Cabdishakuur “Farmaaajo markii uu yimid janaasada qofna lama uusan hadlin, umana tacsiyadeynin” – Kalfadhi
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xalay marti ku ahaa barnaamij looga hadlayay xaaladda siyaasadda ee dalka, ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in madaxweyne Farmaajo uusan salaamin dadkii shalay kasoo qeyb-galay salaadii janaasada ee marxuum Cali Mahdi.
“Waxaan goobta isla tagnay labada madaxweyne iyo Ra’iisul wasaarihii hore Xasan Kheyre. Annaga ayaana ku horeynay goobta oo markii hore tegay, kadddib waxaa yimid Ra’iisul wasaaraha iyo labada guddoon ee Baarlamaanka, mid mid ayaan isu salaanay waana isaga tacsiyadeynay geerida marxuumka.”
“Balse markii uu yimid madaxweyne Farmaajo keliya waxaa uu salaamay Ra’iisul wasaare Rooble, qof kale lama uusan hadlin, ma uusan salaamin, uma uusan tacsiyadeynin. Markii janaasada ay dhammaatayna isaga ayaa dadka ugu hor baxay isaga oo aan cidna la hadlin” ayuu yiri mudane Shakuur.
Aaska Qaran waxaa ka qeyb galay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble, Madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cumar Maxamuud Maxamed, Madaxweyneyaashii hore ee dalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Mudaneyaal ka tirsan Labada Aqal ee Baarlamaanka, Xubno ka mid ah Golaha Wasiirrada, musharraxiinta xilka madaxweynaha, Taliyeyaasha Ciidamada Qalabka Sida, Duubabka Dhaqanka, Culimada Soomaaliyeed, Ehelada Marxuumka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo Safiirka cusub ee Ingiriiska oo kulan ka yeeshay arrimo la xiriira doorashada